ikhaya » Okufumaneka » Gcina Ulawulo Lokugcina Kwakho
Gcina Ulawulo Lokugcina Kwakho
nguJames McKenna, i-VP Marketing & Pre-Sales Engineering, Facilis
Ngamanye amaxesha sifumana umthengi oza kuba ngumthengi onengqondo yakhe ebekwe ngendlela ethile yokusebenza. Oku kungase kusekelwe kumava angaphambili kunye nezinye izibonelelo, umcebisi wesikolo esikhulileyo owasekwa ezindleleni zakhe, okanye nje kuphela inkqubo ebonakalayo ebonakalayo. Kunzima ukutshintsha ingqondo yomntu kwizinto abacinga ukuba ziya kusebenza, kwaye kulula kakhulu ukuhambisa iteknoloji ehambelana nezicwangciso zabo. Andikholelwa ukuba nabani na onokukwazi ngokugcwele malunga nokuhamba komsebenzi okanye indlela yeprojekthi abangayiboni ngabanye. Nangona kunjalo, xa sele ndidibanisene namakhulu amanethiwekhi amancedo kwaye ndinamava kwinqanaba elithandanayo nemisebenzi yokuphumla kwemveliso, ndivakalelwa kukuba njengabathengi benza abathengi bethu ukuzondla ngokubenza bahambe ngokungahambi kakuhle.
Inethiwekhi yokugcina kufuneka yenziwe ngokusetyenziswa kunye nokuhamba komsebenzi engqondweni. Ngokungafani nokugcinwa kwe-IT yokugcinwa kwezinto, ezibandakanya iimfuno zomlawuli kunye nokujonga abasebenzisi bokugqibela njengemhlambi yezimvu ezifanele zenze njengoko zixelelwe, izixhobo eziqhutywayo ezifunyenweyo zifuna isisombululo esinokuba sisetyenziswe lula ngumculi njenginjineli . Kukho izizathu ezininzi zezi zinto; Ukunciphisa iindleko zenkxaso ye-IT kwiindawo zokudala zivumela ezo zixhobo ukuba zichithe ngaphezulu kwiinkqubo nabantu abavelisa imali. Inkqubo yokugcina kwindawo yokudala ibaluleke ngakumbi kwimveliso yansuku zonke kunokuba yindawo yeofisi, apho amaninzi amanqaku ayagcinwa khona kwaye uxinzelelo oluncinci lubekwe kwijubane lendawo yokugcina.
Ukugcinwa kwenethiwekhi ehlanganisiweyo kusetyenziswe ukusebenzisa iteknoloji efanayo efakwe ngokuzenzekelayo kuzo zonke izithuba zokusebenza. Yona inxaxheba yonxibelelwano yonxibelelwano, isalathisi singena kuzo zonke izibonelelo zanamuhla ezivumela ukuba ndibhale lo mbhalo kwifayile engakho kwikhompyutheni yendawo. Inika uxhumano kuwo onke amasebe kunye nemizuzu yexesha. Ngekheli le-IP elifanelekileyo, unako ukufikelela kuyo nayiphi na into, ukuba unayo ixesha elaneleyo lokulinda impendulo.
Noko ke, abaculi, bathembela kumanethiwekhi okuhlela-kwi-intanethi ukukhawuleza, kwaye afumaneke kakhulu, kunye ne-latency ephantsi kunye nokuqhubeka okuqhubekayo kumanqanaba aphezulu emothutho, okanye umhla wokugqibela awuyi kuhlaselwa, kwaye isiko asihlawulwa. Ngenxa yalokhu, abaculi kwiziko lokudala bajonge kakhulu ukuziphatha kwenkqubo yokugcina, kwaye kaninzi bawenza umnxeba kwi-tech inkxaso xa izinto zingalungile.
Ukuba sivuma ukuba iimveliso zokugcinwa kwamashishini ngokuqhelekileyo azifanelekanga kwiziko lokudala, kufuneka sicinge ukuba ukuhamba kwemisebenzi yokugcinwa kwemveliso kwaneengxaki zayo. Ukuba uvula idokhumenti kwi-server yakho yeefisi kwaye ngesizathu esithile awukwazi ukugcina utshintsho lwakho, unokwakhetha igama kwakhona kwaye ulondoloze kwindawo eyahlukileyo. Oku kuya kuba kuhle kumqulu weofisi kodwa cinga ukwenza oku kunye neefayile zeprojekthi kwisakhiwo sokudala - iigigabytes kunye ne-terabytes ezinokubakho ividiyo, i-audio, kunye ne-metadata yeprojekthi ebizwa kwakhona kwaye isasazeka ngeenxa zonke. Yilapho iimvume eziyeke ukuba ngumsebenzi osebenzayo kwaye ziba ngumqobo wokungena emsebenzini. Unxibelelwano lweeNkampani zilandela imigaqo efanayo yemvume njenge-network network. Ukuqinisekiswa, ubunikazi, kunye nemigaqo-nkqubo yeqela kuya kugqiba ukuba ngaba ifayile oyifunayo iyatholakala kuwe.
Ukunikezelwa kwamanqaku okudalwa kwamanqaku afanelekileyo, asebenzisa izibonelelo zamanqanaba aphezulu ngokusekelwe kwisabelo seprojekthi kwaye ugcine iimvume zenkqubo yefayile kwizinga elincinci uya kuphepha izithintelo zokungena emsebenzini. Oku kubizwa ngokuba yi-project based based volume flowflow, kwaye ube ngumqeshi wokuveliswa kwemveliso yesikhokelo kwiminyaka emashumi. Ukususela kwiintengiso ezincinci, umntu oyedwa kunye namafemu eendaba angabonakaliyo kumabonwakude, isabelo somthamo esekelwe ekufikeleleni kwidatha efunekayo yomsebenzi osesikweni yindlela ekhuselekileyo kunye nefanelekileyo yokugcinwa kwempahla. Xa inkqubo yokulawula ivolumu ivumela ukudala okukhawulezayo nokulula, ukutshintsha ubukhulu kunye nokubonelela kweempahla zokugcina, kucacile ukuba le nkqubo yayiyakhelwe injongo kule shishini.
Njengamashishini amaninzi anikezelwe kwiimarike, kukho iindlela ezincinci kwi-key-turn, kwinethiwekhi yokugcinwa kwenkcazelo yokudala. I-teknoloji yemveliso iya kuhlala ixabiso eliphantsi, kuba izixhobo zifanelekile ngeenjongo ezininzi, kwaye zingenayo i-add-value value. Kwaye yile nto ayenjalo, izixhobo. Ndiye ndabona i-turn-key egcinwe ngayo indawo yokugcina indawo efuna ukulawulwa ngomboniselo womgca womyalelo. Abavelisi balezi nkqubo baqala ukugxeka umthengi xa izinto zingasebenzi njengoko zipapashwe ngenxa yokuba abanalo ubuchule bokuyilawula ngokuchanekileyo. Ngaba akuyona ingongoma yenkqubo eyenzelwe le shishini, ukuba isetyenziswe kubantu abasebenza kule shishini?
Kuyinyani ukuba ukwazi yonke into oyifunayo, kwaye ucinga ukuba uzimisele ukuphepha ukwenza into eyahlukileyo, unxibelelwano lweenjini eziqeqeshiwe zingakha inethiwekhi yokugcina esebenzela wena. Kungasondela nokuthembeka kunye nokusebenza kwemveliso yecandelo lokujika, kodwa ke yintanethi yakhe, kwaye uya kumbiza xa kunokwenzeka ukuba wenze utshintsho. Thatha ulawulo lwenethiwekhi yakho ngokukhetha isisombululo esicacile, esitshintshileyo, kunye noqwalaselo lomthwalo wakho wokusebenza. Ukuyilawula ngokwemiqathango yakho, kwaye ngolwazi lwakho malunga nendlela ocinga ukuba kufuneka usebenze ngayo. Shiya amanethiwekhi eofisi kubasebenzi beofisi, kwaye uthenge isitoreji esiza kuqhubeka kunye nabaculi bakho kunye nebhizinisi lakho.
As Facilis'umvangeli omkhulu wevangeli, uJamesMcKennainikezela ngeengcebiso kunye nekhokelo lobuchule ekuncedeni abaphathi bamaziko ukuba bandise ishishini labo. Waqala naye Facilis kwi-2004, kwaye wayenomsebenzi wokuzisa umkhiqizo we-TerraBlock wokuqala. Ngaphambi kokuza Facilis, wayengumlawuli wezobunjineli kwi-PostWorks NY kunye noMyili weMveliso yeeNqila Avid Te knoloji. Ngokuhambisana nebala lakhe lokudala, uJames uye wasebenza njengomhleli kwimveliso eyahlukeneyo ye-TV, iimpapasho zokusasaza kunye namaxwebhu e-Boston naseNew York.
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Imveliso yokuposa ITeknoloji yeTV Injini yeVidiyo	2017-09-14
Previous: I-R & D / Engineer Engineer
next: I-25th Anniversary ye-DPA IGET CLOSER World Tour iqalisa umlenze wesibini kunye nentuthuko eYurophu
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "Thatha Ulawulo Lokugcina Kwakho". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/take-control-our-storage/. Enkosi.